”Waxaa Muqdisho kusoo wajahan ciidan Soomaali ah oo qaatay tababarka ugu adag caalamka!” – New African Facts | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaa Muqdisho kusoo wajahan ciidan Soomaali ah oo qaatay tababarka ugu adag...
”Waxaa Muqdisho kusoo wajahan ciidan Soomaali ah oo qaatay tababarka ugu adag caalamka!” – New African Facts
(Hadalsame) 10 Agoosto 2021 – Waxaa Somalia kusoo noqonaya ciidamo qaatay mid ka mid ah tababarrada caalamka ugu adag, sida uu qabo bogga New African Facts.
Yeelkeede, wax xog ah oo rasmi ah weli lagama hayo wacaalka ciidamadaas la geeyey Eritrea oo qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay halkaa kula kulmeen dhibaatooyin iyo silac aan la qiyaasi karin.
Previous articleRW Rooble oo ku duulay sumadda MW Farmaajo & sababta oo la is waydiinayo!
Next articleDHEGEYSO: Sababta nin dembiyo waawayn Iiraan kasoo galay loo gayn waayey Maxkamadda Hague oo la sharraxay (Meesha hadda lagu maxkamadaynayo?)